Polisim-Pivavahana Saodiana 30 Mianatra Taranja Feno Iadiana Amin’ny Mazia Mainty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Febroary 2016 16:13 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Español, عربي, Português, 日本語, русский, Ελληνικά, English
Lehiben'i Hogwarts ny Profesora Dumbledore mamaly ny filazana tamin'ny fitenenana hoe “Ento aty!” Loharanon-tsary: Pejy Facebook Hummus for Thought [trafon-kena ome-mahery]
Nomen'ny Polisim-pivavahana malaza ao Arabia Saodita ny haja mendrika sahaza ny fahaizany ny Profesora Albus Dumbledore, talen'ny Hogwarts. Mpikambana telopolo ao amin'ny Vaomieran'ny Fiarovana ny Hasina sy Fisorohana Ny Ditra no nahavita fianarana dimy andro ahafahan'izy ireo miady amin'ny mazia mainty, mamantatra ny mpamosavy sy manapaka ny teniny koa aza.
Tsy ilaina ny miteny fa tena voarara tanteraka ao amin'ny fanjakana mpandala ny nendrin-drazana iray ity ny fanaovana mazia, ary ampiharina amin'ireo meloka amin'ny famosaviana sy ny fampiasana ody ao ny didy famonoana ho faty.
Avy ao Emirà Arabo Mitambatra no maneso ilay mpaneho hevitra Sultan Al Qassemi:
Hakingana ilaina amin'ny taonjato faha-21 – polisim-pivavahana miofana hiady amin'ny mazia
Manaraka ny hafa, ary maro ny hafa milaza an'i J K Rowling ilay mpanoratra ny andiam-boky be mpividy Harry Potter.
Misioka mivantana amin'ilay Britanika mpanoratra tantara foronina i Nadim Rifai :
@jk_rowling Harry Potter sy ny Fanjakan'ny Aizina. Ataovy tanteraka izany azafady. Handray 1% aho
Saingy miteny i Hassan Cha fa ny fanofanana ny polisim-pivavahana dia “endrika novaina amin'i Harry Potter [ihany]”:
Polisim-pivavahana miofana hiady amin'ny mazia. Endrika hafa amin'ny fiarovan-tenan'i Harry Potter amin'ny fahaizan'ny aizina.
Eo ankilany ny Harry Potter, toa hita taratra fa efa nandeha elaela ihany ny programam-piofanana tahaka izao. Mpisera Facebook iray nizara lahatsoratra iray efa nivoaka tamin'ny 2013 izay ahitana atrikasa mitovy amin'izao ihany. Ny marina dia iray amin'ny sehatra dimy tsy maintsy ifantohan'ny polisim-pivavahana ny ady amin'ny mosavy. Ny efatra hafa dia: “fiarovana ny Islam, fisorohana ny fandrahonana [kendaroroka], ady amin'ny fanondranan'olombelona, ary ny fiantohana fa tsy misy ny tsy manaja ny mpanapaka ny firenena.”